Safal Khabar - यसरी बढाउनुहोस्, स्मरणशक्ति
बिहिबार, ०५ असार २०७६ (Thursday, 20 June, 2019)
सोमबार, ०६ जेठ २०७६, १८ : ४३
- अर्पण शर्मा
काठमाडौं । बदलिँदो जीवनशैली, तनाव, अस्वस्थ खानपान र अपूरो निद्राजस्ता विभिन्न कारणले मानिसको स्मरण शक्ति कमजार हुँदै गइरहेको छ । उमेर ढल्किदै जाँदा स्मरणशक्तिमा कमी आउनु स्वाभाविक हो । तर, पछिल्लो समय कम उमेरमा स्मरणशक्तिमा समस्या देखिन थालेको छ । स्मरणशक्ति बढाउनका लागि विभिन्न विधि अपनाउन सकिन्छ ।
पूर्व एमाले किन बन्दैछ यति अनुदार ?
स्कुटरबाट झरेर नारायणीमा हाम फालिन युवती
१. बौद्धमार्गी देशका पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो
२. हुम्ला जीप दुर्घटनाका बेपत्ताको अवस्था अझै पत्ता लागेन
३. मेलम्चीको ठेक्का आह्वान, ११ महिनाभित्र पानी उपत्यकामा
४. सिंगापुरका पानीजहाजमा जागिर दिने भन्दै तीन सय युवाबाट ६ करोड ठगी
५. प्रहरीभित्र षड्यन्त्रको राजनीति, प्रहरी अधिकृतको निलम्बन र राजीनामा
६. क्लिन फिडको विरोधः २४ घण्टा विदेशी च्यानल बन्द गरिने
७. काठमाडौंमा युवतीहरूमाथि सिलसिलेबार ‘सिरिन्ज’ आक्रमण
८. काठमाडौंका मेयर–उपमेयर बीच बोलचालै बन्द
९. नेकपाले पार्टी एकताको १३ महिनापछि अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने
१. किन जोडिन्छन हरेक काण्डमा कांग्रेस सभापति देउवा ?
२. पूर्व एमाले किन बन्दैछ यति अनुदार ?
३. स्कुटरबाट झरेर नारायणीमा हाम फालिन युवती
४. लासमाथि कु दृष्टि लगाउँदै देवघाट क्षेत्र विकास समिति, देवघाट घिनलाग्दो घाटमा परिणत हुँदै
५. पूर्व शिक्षामन्त्री डिआर पौडेलको निधन
६. सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराजको यो कस्तो इच्छा ? सिभिल सहकारीको नाममा लुट मच्चाए, निक्षेपकर्तालाई थर्काए
७. जुस कुहिएको फलफूलबाट बन्ने भएकाले त्यसको सट्टा दही, मही पिउनुहोस् : डा. अरुणा उप्रेती